လိင်ကွဲခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကို ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှု (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2008 Jun;29(6):726-35.
ရှင်ပေါလုသည် T, Schiffer B, Zwarg တီ, Krüger TH, Karama S က, Schedlowski M က, M ကို Forsting, Gizewski ER.
Diagnostic and Interventional Radiology and Neuroradiology ဌာန၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Essen တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ။
လိင်ကွဲခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂ္ဂလဒိresponse္တုန့်ပြန်မှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသော်လည်း၊ ကျနော်တို့အမြင်အာရုံလိင်ကွဲနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းလှုံ့ဆော်မှုမှပုဂ္ဂလဒိresponse္တုံ့ပြန်မှုအတွက်မျှော်လင့်ထားကွဲပြားခြားနားမှု ဦး နှောက်ကို activation ပုံစံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်ထင်ဟပ်စေခြင်းငှါရှိမရှိမေးခွန်းဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၄ ယောက်၊ လိင်ကွဲ ၁၂ ယောက်နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူ ၁၂ ဦး တို့ပါဝင်သည်။ ဘာသာရပ်များသည်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွသောဗီဒီယိုများကိုကြည့်နေစဉ် BOLD signal ကိုတိုင်းတာသည်။ SPM12 ကိုဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
တစ် ဦး ချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွပုဂ္ဂလိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားနေဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် လိင်စိတ်နှိုးဆွသောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းသည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေသည့်ပုံစံကို ဦး တည်သည်။ အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏အဓိက ဦး နှောက်hypရိယာဖြစ်သည့် hypothalamus တွင် activation သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။
ပြောင်းပြန်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကိုဆန့်ကျင်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုသည့်အခါနှစ် ဦး စလုံးအုပ်စုများပျက်ကွက် hypothalamic activation ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့ရသော activation ပုံစံသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု၏လှုံ့ဆော်မှုများသည်ပြင်းထန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအနည်းဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊